युथ एसिया कप : भारतसंग खेल्दै नेपाल – सम्पूर्ण जानकारी एकै ठाउँ – WicketNepal
युथ एसिया कप : भारतसंग खेल्दै नेपाल – सम्पूर्ण जानकारी एकै ठाउँ
Birat Jung Rayamajhi, २०७५ आश्विन १२, शुक्रबार १०:५६
विकेटनेपाल, असोज १२ – शुक्रबार
यु-१९ युथ एसिया कप प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमै यु-१९ बिश्व कप बिजेता टिम भारतसंग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ। प्रतियोगितामा सहभागी हुन बिहिबार युवा टोलि बंगलादेश पुगीसकेको छ। प्रस्तुत छ प्रतियोगिताबारे सम्पूर्ण जानकारी एकै ठाउँमा –
नेपालले कहिले को संग खेल्दै छ ? सेप्टेम्बर २९ – भारतसंग , अक्टोबर १ – अफगानिस्तानसंग , अक्टोबर २ – युएईसंग
खेल कति बजे सुरु हुनेछ ? नेपाली समय : ८:४५ बजे बिहान सुरु हुनेछ
लाइभ कहाँ हेर्ने ? भिडियो लाइभ हुने जानकारी छैन , स्कोर अपडेट विकेटनेपालमा
नेपालको सम्भावना कति छ ?
नेपालले समुह चरणमै बिश्वकप बिजेता भारत र युथ एसिया कपको साविकको बिजेता अफगानिस्तानको सामना गर्दैछ भने युएई तुलनात्मक रुपमा कमजोर रहेको छ। नेपालले सेमीफाइनलमा पुग्नको लागि कम्तिमा पनि २ खेल जित्नुपर्नेछ। युएईलाई पारित गर्न नेपाललाई कठिन हुने छैन भने अफगानिस्तान र भारत मध्ये एउटा खेलमा जित हात पारे नेपाल अघिल्लो चरण प्रवेश गर्नेछ।
यो भन्दा अगाडीको बर्ष युथ एसिया कपमा नेपाललाई सेमीफाइनलमा अफगानिस्थानले पराजित गरेको थियो जुन टिममा हाल बिश्व क्रिकेटका चर्चित स्पिनर मुजिब उर् रहमान रहेका थिए। मुजिबकै बलिङ्गको कारण नेपालले सेमीफाइनलमा हार बेहोर्नु परेको थियो। तर यो पटकको अफगानी टिम त्यति मजबुत छैन जसलाई भर्खरै भारत सिरिजमा नेपालले पराजित समेत गरेको थियो।
तुलनात्मक रुपमा भारत टिम प्रतियोगिता जित्ने दाबेदार टिम हो त्यसैले भारतलाई पराजित गर्न नेपालले अपत्यारिलो नतिजा निकाल्नु पर्नेछ। तर अफगानिस्तान भने नेपालको तुलना गर्न सकिने टिम हो जसलाई नेपालले पराजित गर्दै सेमीफाइनल पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ स्पिन बलिङ्गमा देब्रे हाते स्पिनर सागर ढकाल र सुर्य तामांग र अफ स्पिनर पवन सर्राफ परिपक्व बलर हुन्। सागर र पवनले भारत सिरिजमा राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए भने सुर्यले यु-१६ टिमको लागि गत बर्ष एसीसी यु-१६ मा शानदार बलिङ्ग गरेका थिए।